केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन को–को कस्सिए ? - Enepalese.com
केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन को–को कस्सिए ?
इनेप्लिज २०७२ जेठ १६ गते ५:०३ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, १६ जेठ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेकपा एमालेका तर्फबाट नेताहरु सक्रिय भएका छन् । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली लगायतका नेताहरुले एमाओवादी नेताहरुसँग गोप्य छलफल र वार्तालाई अघि बढाएको स्रोतले बतायो । जारी छलफल र द्विपक्षीय वार्ता चार–पाँच दिनमै निष्कर्षमा पुग्ने बताइएको छ । ‘अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाओवादीसमेत सकारात्मक देखिएको छ । तर, उसले गम्भीरतापूर्वक यो कुरा राखेको छ कि छैन् भन्ने कुरा केही दिनमै छर्लङ हुन्छ,’ एमाले स्रोतले भन्यो, ‘संविधानका अन्तरवस्तुमा कुरा मिले मात्र एमाले र एमाओवादीको साझेदारी सम्भव छ । त्यसका लागि गोप्य ढंगबाट गृहकार्य भइरहेको छ ।’ एमाओवादीसँगको छलफल सकारात्मक भएमात्र काँग्रेससँग निर्णायक छलफल गर्ने एमालेको तयारी छ । काँग्रेस सभापति समेत रहेका सुशील कोइरालाले राष्ट्रिय विपतको बेला सरकारको सही नेतृत्व बनाउन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय सरकारको खोजी भइरहेको छ । काँग्रेसको महाधिवेशन समेत नजिकिएका कारण सुशीललाई हटाएर आफै प्रधानमन्त्री बन्ने, नसके एमालेलाई सहयोग गर्ने रणनीतिमा काँग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा समेत देखिएका छन् । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भइरहँदा आगामी महाधिवेशनमा शक्तिको दुरुपयोग हुने भन्दै देउवा समूह समेत सरकार फेर्ने दाउमा देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादी समेत राष्ट्रिय सरकारको बहानामा सरकारमा छिर्ने मनस्थितिमा देखिएको छ । एमालेमा भावी प्रधानमन्त्रीको विषयमा औपचारिक छलफल नभए पनि संसदीय दलका नेता तथा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन करिब करिब सहमति जस्तै देखिएको छ ।